Fomba fahandro legioma nentin-drazana, tena manankarena ary mora omanina! | ThermoRecipes
Verduras29 minitraOlona 4185 kaloria
Iza no mbola tsy nanao a legioma nopotsehina? Ity fomba fahandro ity dia manome valiny mahatalanjona ary, miaraka amin'ireo firaketana izay tratran'ny Thermomix, dia tsy azo tohaina tanteraka. Puree io vegan, vita amin'ny legioma ihany, feno vitamina, antioxidant, mineraly ary fananana be. Raha tsy manana legioma ianao dia aza manahy, ataovy tsy misy azy na soloina hafa, izay mitovy matsiro ihany koa. Ary noho izany dia manampy antsika koa izy io araraoty ny legioma izay ananantsika ao anaty vata fampangatsiahana.
Es Kely kaloria, mety ho an'ny mivelona amin'ny vola fanampiana fifehezana lanja, ka ny ankizy mihinana legioma sy ho an'ny tsy mahazaka laktazy. Azonao atao ny manisy toast na tofu vitsivitsy (toy ny ao amin'ny crème voatabia miaraka amin'ny tofu, Tadidinao ve?) Matsiro.
Resipeo: lahatsoratra sy sary Ana Valdés (tonian-dahatsoratry ny Thermorecetas taloha)
Lahatsary: ​​Jorge Méndez (tonian-dahatsoratry ny Thermorecetas taloha)
1 Fomba fahandro legioma amin'ny Thermomix
2 Legioma nopotsehina
3 Fitoviana amin'ny TM21
4 Azo atao mangatsiaka ve ny puree legioma?
5 Puree legioma maivana ary manadio hampihena ny lanjany
6 Puree legioma vita an-trano
7 Puree legioma tsy misy ovy
8 Puree legioma avy amin'ny hena sy trondro
9 Ahoana ny fanararaotana varoma hanaovana puree legioma
10 Puree legioma ho an'ny zazakely misy Thermomix
10.1 Sakafo zaza intelo
Fomba fahandro legioma amin'ny Thermomix
Etsy ambany no anananao ny fomba fahandro hanomanana puree legioma mampiasa ny Thermomix:
Puree legioma nentim-paharazana, miaraka amin'ireo toetra mampiavaka azy sy ny endriny tena tsara an'ny Thermomix anay.
Fotoana hiketrehana: 29M
Fotoana manontolo: 29M
200 g tsaramaso maitso fisaka
200 g ovy
75 g an'ny epinara
Karaoty 250 g
120 g an'ny boka
Menaka 50 ml
Natsofokay tao anaty vera, nosasana sy notapahina ho lehibe, ny tsaramaso maintso, ovy, epinara, karaoty, hite, menaka ary sira mba hanandrana. Tetehina mandritra 15 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Izahay dia manamarina fa ny zava-drehetra dia efa voadio Raha tsy izany dia manao programa izahay 5 segondra fanampiny amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Sauté ho an'ny 12 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 2.
Manampy rano sy sira 700 g izahay hanandrana. Izahay mahandro sakafo 15 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 2.
Manandrana sy manarina ny sira izahay, avelao hangatsiaka kely izy io ary potehina mandritra 1 minitra, hafainganana mandroso 5/10.
Raha tsy manana anana ianao, dia azonao soloina iray hafa mitovy lanja aminy.
Raha esorinao ny iray amin'ireo legioma dia mila esorinao ny rano. Raha ny marina, ny rano atsofoka ao dia ilay mifanandrify amin'ny firakofana anana, mihoatra ny roa eo ho eo. 4 lehibe na 5 ny ampahany antonony mivoaka.
Azonao atao ve ny mangatsiaka ny ovy nopotsehina de legioma?
Eny, eny tokoa. Imbetsaka isika no mieritreritra fa matoa ny ovy na ny vary tsy dia mihamangatsiaka be loatra, raha ampidirintsika amin'ny menaka na legioma dia tsy azo foronina. Na izany aza, ao anaty tsiranoka legioma, ny ampahany amin'ny ovy na vary dia kely (ohatra, 10%) amin'ny puree rehetra, ka noho izany azo averina mivaingana. Na izany aza, raha manomana ovy nopotsehina manokana isika, amin'ity tranga ity dia tsy afaka mivaingana izany satria ny isan-jaton'ny ovy amin'ity tranga ity dia tokony ho 60%.
Rehefa manao defrost isika dia tsy maintsy avelao ao anaty vata fampangatsiahana 24 ora alohan'ny handaniana azy ary avy eo dia tsy maintsy hafanaintsika araka ny tokony ho izy mba haka endrika tsara indray. Tena zava-dehibe izany. Afaka manao izany amin'ny fomba telo isika:
Ao amin'ny microwave lafaoro manafana azy amin'ny heriny lehibe indrindra mandritra ny 2 minitra (miankina amin'ny habetsaky ny puree izay nohafanantsika, amin'ity indray mitoraka ity dia ho mihoatra ny latsaka) ary afangaro amin'ny fork mahery rehefa tapitra ny 1 minitra ary rehefa esorintsika izany.
Ao amin'ny saosy amin'ny afo, ahetsiketsika hatrany mandra-pahatongan'ny setroka.
Ao amin'ny Thermomix manafana azy amin'ny 4 ka hatramin'ny 8 minitra (miankina amin'ny habetsaky ny puree), ny hafanana 90º, ny hafainganana 3.
Raha vonoina dia tsy afaka mivaingana intsony.
Ovy nopotsehina de legioma maivana ary manadio very lanja
Purees legioma dia a mpiara-dia tsara amin'ny sakafo maivana ary mampihena. Miaraka amin'ny haitao miavaka Thermomix dia tratra, mba hahafahantsika mampiasa ireo akora ilaintsika mba hifanaraka amin'ny sakafon'ny kaloria ambany ny legioma legioma. Manaiky ny karazana legioma sy ron-kena akoho, trondro na legioma vita an-trano izy io ary ho fanarahana azy dia afaka mampiasa tofu na chips misy legioma isika.
Para ampidino ny habetsaky ny sira ao anaty purees, afaka mampiasa zava-manitra na ranom-boasary / voasarimakirana izahay hanatsarana bebe kokoa ireo tsiro.
Ovy nopotsehina de legioma an-trano
Misaotra ny Thermomix afaka manomana karazana crème rehetra isika o legioma nopotsehina izay eritreretintsika ary miaraka amin'ny akora namboarina sy natiora daholo. Ao anatin'ny 20-30 minitra fotsiny dia efa vonona ny puree.
Fotoana mety ihany koa hanaovana resipeo hampiasaina ary handaniantsika izay legioma ananantsika ao anaty vata fampangatsiahana sisa tavela amin'ny fanomanana iray hafa na avy aminay izay mihoatra.
Ovy nopotsehina de legioma tsy misy ovy
Raha mila ataovy tsy misy ovy ao anaty puree legiomaMba hanomezana vatana bebe kokoa azy, dia tsy maintsy ahenantsika kely ny habetsaky ny ranoka, asio fromazy fanosotra na, raha avelantsika ny sakafo dia ampiasao akora matevina hafa toa ny vary na ny vovo-katsaka.
Puree legioma avy amin'ny hena sy trondro
Azontsika atao ny manararaotra ilay puree mba hampidirana sakafo hafa izay hitan'ny ankizy fa sarotra kokoa ny mihinana azy, toy ny hena (henan-kisoa, hen'omby na akoho) na trondro, izay mety manana endrika sarotra sakanana toy ny hena na ny fofona na ny tsiro tsy sitrakao toa ny trondro.
Amin'ity tranga ity, azontsika atao ny manampy sombin-kena na trondro, mitovy habe amin'ny legioma, mandritra ny fandrahoana ireo legioma miaraka amin'ny ron-kena. Rehefa tapitra ny fotoana fandrahoan-tsakafo dia arotsaka antsasaky ny 1 minitra na 1:30 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 10 ny rehetra.
Mazava ho azy fa afaka manala azy any aoriana isika. Ireto misy ohatra momba ny puree legioma misy hena na trondro:
Hake sy puree tsaramaso maintso
Salady an'ny salady sy ny hake puree
Ahoana ny fanararaotana varoma hanaovana puree legioma
Iray amin'ireo tombony lehibe azo amin'ny Thermomix ny fananana kaontenera 4 iray ahafahantsika mahandro lovia maro amin'ny fotoana iray, mitsitsy angovo sy fotoana:
Ny vera, izay hahandroanay zavatra izay miteraka etona (rano, laoka lentil, legioma misy ron-kena ...)
El harona, izay ahafahantsika mametraka akora miaraka aminy toy ny vary na paty
Kaontenera varoma, ny hoe lalina dia ahafahantsika mametraka legioma toy ny ovy, tsaramaso maintso, broccoli, cauliflower, carrot ... fa misy atody sasany koa nofonosina sarimihetsika mangarahara mba hahandroana azy ireo sy hampiasaina amin'ny salady, famenoana na atody tsotra nandrahoina fotsiny.
Fantsona varoma, izay ahafahantsika mametraka nofon-trondro na nofon-trondro nofonosina taratasy papillote karazana foil na amin'ny sarimihetsika mangarahara mba hahafahantsika mandany azy ireo any aoriana araka izay tiantsika.
Puree legioma ho an'ny zazakely misy Thermomix
Safidy mety indrindra rehefa manomboka mihinana sakafo vaovao toy ny legioma, hena ary trondro ny zanatsika dia ny fanomanana purees amin'ny Thermomix antsika. Ny kely dia manomboka amin'ny 6 volana hisakafoanana sakafo toy ny legioma, noho izany amin'ny robotantsika dia afaka manomana puree sy sakafon-jaza tsy tambo isaina isika ary mitahiry azy ireo ao anaty siny kely ho toy ny servisin'ny tsirairay ary hampangatsiaka azy ireo. Ka hanana sakafo salama sy an-trano foana ho vonona ho azy ireo. Eto izahay mamela anao safidy tsara fomba fahandro ho an'ny ankizy 6 volana ka hatramin'ny 1 taona.
Sakafo zaza intelo
Fetsy lehibe dia ny fanararaotana mahandro legioma isan-karazany tsara ao anaty vera ary mampiasa ilay fitoeran-doko varoma handrahoana karazana hena sy trondro isan-karazany fonosana fonosana plastika. Amin'izany no ahafahantsika manorotoro ny ampahany amin'ny legioma miaraka amin'ilay akora nofidintsika dia hena na trondro ary avy eo dia manao purees na sakafon-jaza.
Avelanay ho anao izao fomba fahandro intelo ho an'ny zazakely ho an'ny TM5 izay miasa mahafinaritra (tadidio fa raha hanao izany amin'ny TM31 na TM21 ianao dia tsy maintsy ahenao ny vola ¼) satria tsy dia manana fahaiza-manao ireo solomaso ireo.
Ary tena ilaina koa izany fonosinao anaty sarimihetsika mangarahara tsirairay ny hena sy trondro tsirairay mba tsy hisy fandotoana akora sasany amin'ny hafa, na fampifangaroana tsiro.
Izahay koa mamela anao ny famantarana ny fonosana banga ny siny feno voankazo (mitandrema, ny voankazo ihany, satria tsy azo antoka ny hena, legioma na trondro) tena ilaina tokoa ao anaty pantry:
Ary farany, aza adino ny mitsidika ny anay faritra recette an'ny ankizy, izay ahitanao hevitra tsara hanomanana ny ankizy bitika. Ho hitanao ireo fomba fahandro zaraina amin'ny taona mba hahamora kokoa sy haingana kokoa anao hahitanao izay tadiavinao.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Latsaky ny 1/2 ora, Menu isan-kerinandro, Resipeo ho an'ny ankizy, fitondrana, Lasopy sy menaka, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Tsotra » Puree legioma nentim-paharazana
Salama, mila fihavaozana ve ny epinara na azo atao mangatsiaka? Raha ity farany, miovaova ve ny fotoana fandrahoana? . MISAOTRA
Salama Clara, azonao atao ny mametraka azy ireo mangatsiaka, fa aza apetraka amin'ny voalohany. Ampio izy ireo amin'ny dingana 4 ary asio 18 minitra fa tsy 15, satria ho elaela vao hahatratra 100º. Famihinana!
Salama, nivoaka ny matsiro madio
Misaotra nametraka azy eto
Misaotra anao, Rita. Oroka!
Toti dia hoy izy:
Tian'ilay kely izany ka nahomby. Tianay izany, misaotra !!! 🙂
Mamaly an'i Toti
Eny, raha nanome ny dingana mialoha ilay kely dia afa-po kokoa isika! Misaotra nanoratra Toti 🙂
Salama! Manana fanontaniana aho, maninona no avelanao hidina ny maripana hametaka ny puree?
Salama Maria, noho ny antony ara-piarovana. Ny Thermomix dia tsy hahatratra ny revolisiona 10.000 amin'ny hafainganam-pandeha 10 raha 100% ny atiny satria mampidi-doza ny fiparitahana amin'izany mari-pana izany. 🙂
Spaghetti misy saosy rosemary sy voasarimakirana